Biden Oo Qaabka Uu Uga Hadlay Duulaanka Qaza La Qoonsaday - #1Araweelo News Network | #1Araweelo News Network
#Netanyahu In Weerrarka #Qaza inay sii jiri doonto Inta I#sreal Gaadhay Hadafkeeda
Washington(ANN)-Hadal kasoo baxay Aqalka Cad ee Maraykanka ayaa dhaliyay doodo, kadib markii Madaxweyne Joe Biden khadka Telefoonka kula hadlay ra’iisal wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo madaxweynaha maamulka Falastiin Mahmoud Abbas xili ay sii xoogeysanay duqaynta Yuhuudu ku hayso Qaza.
Arrintaa oo sababtay walaac soo waajahay amaanka Bariga dhexe oo si weyn looga wer weray, balse Biden ayaa Netanyahu ku celceliyay taageerida xuquuqda Israel ee wuxuu ugu yeedhay isdifaacida weerarada gantaalada ee uga imanaya kooxda xagjirka ah ee Xamaas sida laga soo xigtay qoraalka laga sii daayay Aqalka Cad oo ka waramay waxyaabaha Madaxweyne Biden kala hadlay Netanyahu iyo Cabaas.
Laakiin Biden ayaa sidoo kale walaac ka muujiyay amaanka saxafiyiinta kadib markii ciidamada Israel ay dhulka la simeen dhisme ay ku yaalay xafiisyo xarumo warbaahineed oo ay ku jirto wakaalada wararka ee AP iyo warbaahin kale.
Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa Sabtidii la hadlay Ra’iisal Wasaaraha Israel Benjamin Netanyahu iyo Madaxweynaha Maamulka Falastiin Maxamuud Cabaas, iyadoo xaaladdu faraha kasii baxay, isla markaana khasaaraha dhimashada dhaawaca iyo Burburka ay sabbabeen duqaymaha Israel sii kordheen, balse Madaxweyne Biden ma muujin waxa ku dhacaya shacbiga Falastiin ee kaga imanaya Israel, wuxuuna carabka ku adkeeyay xaqa ay u leedahay in ay is difaacdo, isagoo taa bedelkeeda iska caabinta Xamaas ugu baaqay in ay joojiyaan gantaalaha ku jihaysan Israel.
Hase yeeshee wada hadalka Aqalka Cad sheegay in Madaxweyne Biden ku sameeyay Taleefanka, ayaan waxba ka bedelin xaaladda, iyadoo duqaymaha Israel ee Marinka Gaza ay sii kordheen oo aannay jirin wax calaamado ah oo muujinaya in ay joogsan doonaan duqaymuhu.
Dhanka kale, Netanyahu, ka dib Telefoonka Biden, wuxuu telefishanka ka jeediyay hadal uu ku sheegayo in duqaymuhu ay socon doonaan ilaa inta laga gaadhayo himilooyinka Israel.
“Ujeedadayadu waa inaan u dirno Hamas fariin ah in aannay mudnayn soo dirista gantaallo marka xigta ee ay doonayaan, ayuu yidhi Waan la macaamili doonnaa mana jiro qof sharciga ku soo qaadaya gacantooda. ”
Biden wuxuu ku celiyey taageeridiisa xuquuqda Israel ee isdifaacida weerarada gantaalada ee ka imanaya kooxda Hamas ee Gaza wuxuuna cambaareeyay weerarada ka dhaca magaalooyinka iyo magaalooyinka Israel, sida laga soo xigtay Aqalka Cad.
“Madaxweynuhu wuxuu xusay in xilligan lagu jiro khilaafka uu masiibo galaaftay nolosha dadka reer Israel iyo Falastiin ee rayidka ah, oo ay ku jiraan carruurta,” ayaa lagu yidhi warka Aqalka Cad, “Wuxuu muujiyay walaac ku saabsan nabadgelyada iyo amniga suxufiyiinta wuxuuna xoojiyay baahida loo qabo in la hubiyo ilaalinteeda.”
Netanyahu ayaa u sheegay Biden in Israel ay sameyneyso wax walba oo ay uga hortageyso waxyeelada kuwa aan ku lug laheyn Xamaas iyo kuwa aan ku lug laheyn dagaalka, waxaana laga soo daad gureeyay 12-dabaq oo ku yaal marinka Gaza oo ay ku yaalliin xafiisyada wakaaladdaha wararka ee Associated Press iyo Al. Jazeera. Saddex gantaal oo culus oo Israel leedahay ayaa Sabtidii dumiyay dhismaha.
Madaxweynaha ayaa sidoo kale kala hadlay Cabaas xiisadaha ka taagan magaalada Qudus iyo Daanta Galbeed iyo sida ay u wada daneynayaan in Qudus laga dhigo meel nabad ku wada noolaansho ay ku noolaadaan dadka diimaha iyo diimaha kala duwan leh.
“Madaxweynaha ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay sida adag ee ay uga go’an tahay xalka wada-xaajoodka laba dowladood oo ah wadada ugu fiican ee lagu gaadhi karo xal cadaalad ah oo waara oo laga gaadho khilaafaadka Israel iyo Falastiin,” sida uu sheegay Aqalka Cad.
Qalalaasaha aan caadiga ahayn ee ka socda Israel iyo Marinka Gaza ee Falastiin, ayaa isu beddelay tijaabo hore oo deg deg ah oo loogu talagalay siyaasadda arrimaha dibadda ee Biden. Madaxweynuhu wuxuu ka shaqeynayay Xafiiska Oval in muddo ah Sabtidii. Wuxuu badanaa ka shaqeeyaa Camp David ama gobolkiisa Delaware inta lagu jiro dhamaadka todobaadka.
Hase yeeshee waxa jira warka sheegaya in xafiisyada warbaahinta la burburiyay uu dhaliyay cadho caalami ah iyo naxdin, taasoo keentay in Aqalka Cad uu ka jawaabo ka hor inta aan la sii deyn qoraalka Biden.
Maamulka Biden wuxuu “si toos ah ula xidhiidhay Israel in xaqiijinta amniga iyo amniga suxufiyiinta iyo warbaahinta madaxa-bannaan ay tahay mas’uuliyad weyn,” xoghayaha warfaafinta ee Aqalka Cad Jen Psaki ayaa qoraal ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka Sabtidii.
Sen. Bob Menendez, D-NJ, gudoomiyaha guddiga xidhiidhka arrimaha dibadda ee Senate-ka, bayaan uu soo saaray sabtidii wuxuu ku baaqay “xisaabinta buuxda ee falalka horseeday dhimashada rayidka iyo baabi’inta xarumaha warbaahinta.”
“Dhammaan hoggaamiyeyaasha siyaasadeed iyo kuwa militariga waxaa saaran mas’uuliyad inay ilaaliyaan qawaaniinta iyo sharciyada dagaalka waana muhiimadda ugu weyn ee dhammaan jilayaasha ay u helaan qaabab ay ku sii deyn karaan xiisadaha,” ayuu yiri, wuxuuna ku baaqay in la joojiyo rabshadaha, isagoo ula jeeda duulaanka iyo duqaymaha Qaza.
Dumqaymaha maalintii Toddobaad galay ee Qaza iyo gumaadka ah ee dadka Falastiin lagu xasuuqayo, waxaana ugu yaraan lagu dilay 139 qof, kuwaas oo ay ku jiraan 39 carruur ah, Gaza. Israel gudaheeda, sideed qof ayaa ladilay markii colaaduhu sii kordhayaan.
Hoggaamiyaasha dunida Islaamku indhaha la qarsadeen, marka laga reebo dhawr dal oo Iran iyo Turkigu u horeeyaan, waxaana daawanaya xasuuqa Yuhuudu ku hayso shacbiga masaakiinta ah ee Falastiin dalalka Khaliijka ee sannadkii hore heshiishka loogu magacdaray Abraham Agreement la galay Yuhuuda.